Amahlathi ayizipoki, ukubukeka okusha komhlaba | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Uma sicabanga ngehlathi, sicabanga ngeqembu lezihlahla, izihlahlana nezinye izitshalo ezihlangana nochungechunge lwezilwane nezinambuzane endaweni yemvelo. Kepha ngenxa yamazinga okushisa anyukayo nemvula enciphile, konke lokhu kuphila kuyalahleka, kuguqula indawo enhle ibe yi ihlathi lesipoki.
Izitshalo ezake zabukeka ziphilile manje ziqala ukufa kancane kancane ngenxa yengcindezi yokushisa nokuntuleka kwamanzi ahlanzekile.
Amahlathi emimoya abelokhu ekhona, kepha emashumini eminyaka amuva nje le nto iye yashesha. Njengoba iqhwa ePoles liyancibilika ngenxa yokufudumala kwembulunga yonke, ulwandle lukhuphuka futhi lubeka izimpilo zezitshalo nezilwane ezahlukahlukene ezihlala ngasogwini engcupheni. Amanzi anosawoti angena ngaphakathi ezweni, abulale izidalwa zezitshalo ezazisetshenziselwa amanzi amasha; Ngaphandle kokudla noma ukuvikelwa, izilwane ziyahamba ziyofuna indawo engcono.
Lokhu, noma kwenzeka emhlabeni wonke, kuyakhathaza kakhulu ENyakatho Melika, lapho kunamakhulu ezinkulungwane zamahektha anezihlahla ezibulewe ukufika kwamanzi anosawoti, asuka eCanada aya eFlorida.
Ngakho-ke, izinguquko zenzeka ku-ecosystem. Lapho kwakukhona amahlathi phambilini, manje sekukhona amaxhaphozi, ethinta imvelo ngezindlela ezahlukahlukene, ngokwesibonelo: izinyoni ezifudukayo ezincike emahlathini zibona indawo yazo inciphile, kepha njengoba amanzi eba nosawoti, indawo ikhiqiza kakhulu njengoba izilwane zasemanzini ziqala ukufika ungumnikazi wezilwandle.
Ukubukeka okwandayo kwalawa mahlathi kungubufakazi obusobala bokuthi ukuguquka kwesimo sezulu yinto yangempela okumele siyinake ukuze sithathe izinyathelo ezidingekayo zokunqanda inhlekelele.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukuguquka kwesimo sezulu » Amahlathi ayizipoki, ukubukeka okusha komhlaba